Masks, Ndidi Ndidi, Ndina Hospitallọ Ọgwụ - JBH Medical
Anabata Anhui JBH Medical
Gụọ ihe a ka ịmara gbasara anyị!
Anhui JBH Medical Apparatus Co., LTD guzobere na 2013.with 7 ụlọ ọrụ ntinye aka ma nwee ụkpụrụ mmepụta ọgbara ọhụrụ nke 78000 acres. Otu ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na ntinye nke R & D na ndị otu na-azụ ahịa mba ụwa, nke nwere ngwaahịa nke aka ya yana ngwaahịa ODM maka ijere ahịa ụwa, ugbu a nwere ihe karịrị ndị ọrụ 500 nwere isi obodo e debara aha ha karịa 12 nde USD. Isi ngwaahịa bụ ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ nwere ọgụgụ isi, ebuli ọrịa, nkpuchi nchebe, yana ngwaọrụ ndị ọzọ metụtara ahụike. Na usoro nkwado nke mba ụwa, ISO 9001, ISO14001, ISO 13485 wee kwado ụlọ ọrụ nyocha nke SGS, ebe ngwaahịa gosipụtara FDA, CE, na CFDA, na-azụ ahịa karịa mba 70. Anyị ejirila ime ihe n'eziokwu, ọ ,ụ, na afọ ojuju wee na-aga n’ihu ma na-enwe ihe ịga nke ọma.
Kedu ihe kpatara Họrọ Ahụ Anhui JBH?
Ngwaahịa zutere ISO, CE, na FDA Standards. Pụrụ ngwaahịa. SGS ikike factory.
Zuru oke zụọ ahịa na-elekọta otu, dị njikere ịza ajụjụ gị niile.
Anyị na-akwụ ụgwọ ụgwọ maka usoro njikwa mma.
Anyị na-ewere nsogbu ọ bụla, na-enweghị mkpesa. Anyị anaghị ezu ike na laure anyị.
Bedlọ Nlekọta Eletriki Maka Ndị Nkwarụ 1.V ....
Foldlọ nchekwa ụlọ maka ndị nwere nkwarụ mfe t ...
3 n'ígwé, FDA, CE Kwadoo A disposable nkpuchi ...
FDA, CE nke akwadoro Model Mba: JBHF001 Disposa…
N'ozuzu Size 1110 * 640 * 1480mm Ọrụ Cycl ...
Foldable obere Ndidi nyefe Ebuli ndoli f ...
N'ozuzu Size 1510 * 735 * 1460 mm Ọrụ Cyc ...
Ihe eji emecha ihe nkpuchi.
ụlọ ọgwụ bed bed control, ụlọ ọgwụ ọrịa bed, ọrụ nnyefe akwa, akwa ụra ụlọ ọgwụ, nkpuchi ihu ọnụ, ihe nkpuchi ihu nwere ike wepu na ntanetị,
ọrụ nnyefe akwa, ụlọ ọgwụ bed bed control, ihe nkpuchi ihu nwere ike wepu na ntanetị, nkpuchi ihu ọnụ, akwa ụra ụlọ ọgwụ, ụlọ ọgwụ ọrịa bed,